News - Ailika Waxay Soo Bandhigeysaa Qeybta Codsiga ee Abuurka Korantada Cadceeda
1. Awoodda qoraxda ee isticmaalayaasha: Ilaha korontada ee yar yar oo u dhexeeya 10-100w waxaa loo isticmaalaa isticmaalka maalinlaha ah ee korontada meelaha fogfog oo aan koronto lahayn, sida plateaus, jasiiradaha, aagagga xoola-dhaqatada, xadka iyo wixii kale ee milateri iyo rayidba, sida nalalka , TV, Rikoor raadiye, iwm; Nidaamka dhalinta korontada ee ku xiran shabakadda korantada 3-5kw; Bamka biyaha lagu dhaansado ee loo yaqaan 'Photovoltaic pump': oo loogu talagalay cabbitaanka iyo waraabinta ceelasha biyaha qoto dheer ee ku yaal gobollada aan koronto lahayn
2. Gaadiidka: sida nalalka hagidda, nalalka calaamadaha taraafikada / taraafikada, digniinta taraafikada / nalalka calaamadaha, laambadaha waddooyinka, nalalka carqaladda sare leh, waababka telefonka / tareenka xaddidan, korantada korantada ee korantada laga ilaaliyo, iwm.
3. Goobta isgaarsiinta / isgaarsiinta: saldhigga gudbinta ee microwave solar, saldhigga dayactirka fiilooyinka indhaha, nidaamka awoodda isgaarsiinta / isgaarsiinta / qalabka wax lagu duubo; Nidaamka sawir-qaadaha taleefanka miyiga, mashiinka isgaarsiinta yar, askarta korontada GPS.
4. Batroolka, badweynta iyo saadaasha hawada: nidaamka ilaalinta tamarta qoraxda ee dhuumaha saliida iyo marinka keydka shidaalka, korontada gudaha iyo tan deg-degga ah ee barxadda qodista saliida, qalabka baarista badweynta, qalabka indha indheynta / saadaasha hawada, iwm.
5. Awood siinta laambadaha guriga: sida laambada barxadda, laambada wadada, siraad gacanta, laambada kaamamka, laambada buuraha, laambada kaluumeysiga, laambada iftiinka madow, laambada goynta xabagta, nalka keydinta tamarta, iwm.
6. Saldhigga korantada ee loo yaqaan 'Photovoltaic power station': 10kw-50mw saldhig madaxbanaan oo sawir-qaade ah, dabaysha-qorraxda (naaftada) saldhigga korantada oo la isu kaabayo, saldhigyo waaweyn oo gawaarida la dhigto oo waaweyn, iwm
7. Qaab dhismeedka qoraxda: isku darida tamarta qorraxda iyo qalabka dhismaha si mustaqbalka looga dhigo dhismayaal waawayn oo gaadha isku filnaasho koronto ayaa ah jihada horumarineed ee weyn mustaqbalka.
8. Meelaha kale waxaa ka mid ah: iswaafajinta baabuurta: baabuurka qoraxda / gaariga korontada ku shaqeeya, qalabka ku shaqeeya batteriga, qaboojiyaha baabuurta, marawaxada hawo bixinta, sanduuqa cabitaanka qabow, iwm; Nidaamka dhalinta tamarta la cusboonaysiin karo ee soosaarka hawo-qorraxda iyo unugga shidaalka; Awood siinta qalabka macaaneynta biyaha badda; Dayax gacmeedyada, dayax gacmeedyada, xarumaha tamarta qorraxda ee hawada sare, iwm.